PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - WENZA UBUNGEBENGU OBUCHWEPHESHIWE UTOM CRUISE
WENZA UBUNGEBENGU OBUCHWEPHESHIWE UTOM CRUISE
Ilanga langeSonto - 2017-08-27 - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA
AMERICAN MADE UMQONDISI: Doug Liman ABADLALI ABAPHAMBILI: Tom Cruise (Barry Seal), Caleb Landry Jones (JB), Domhnall Gleeson (Monty Schafer), Lola Kirke (Judy Downing), Sarah Wright (Lucy Seal), Jayma Mays (Dana Sibota), Benito Martinez (James Rangel), Jesse Plemons (Sheriff Downing) UHLOBO: Biographical Crime IMINYAKA: 16 D/L/S UMHLAZIYI: Zowakha Mbatha
IMPELA umhobholo uwumnyombo wobubi obuningi. Ubarry uyipilot esebenzela inkampani ITWA. Uhehwa ukuba ayeke ukushayela la mabhanoyi nguschafer osebenzela abaphenyi bamacala anzulu ngoba nakhu yena eyisethenjwa ekushayeleni.
Ukusebenzisana kwakhe NECIA kuzosho ukuthi uzolahlekelwa yimihlomulo ejwayelekile nokukhathaza unkosikazi wakhe ulucy abakha naye umndeni. Ugcina eqamba amanga kumkakhe athi usasebenzela yona ITWA kanti useqale izimanga.
Kulo msebenzi uthola ithuba lokushushumbisa izidakamizwa nezikhali. Uschafer usezinhlelweni zokubamba ofishi abakhulu ekudayisweni kwale mibulalazwe nokwenza kube sengathi uyamseka kukho konke, amkhiphe nasejele
KUYICHILO ukuba abaculi abaningi baseningizimu Afrika behlulwe wukucula iculo lesizwe. Kukaningi sibabona bedla amazambane ashisayo ikakhulukazi uma kunemicimbi emikhulu.
Kuzokhumbuleka ukuthi kuke kwenzeka uras Dumisani ongowokudabuka ethekwini waphoxa emhlabeni wonke jikele ebhimba iculo lesizwe, ngesikhathi kudlala iqembu lesizwe lerugby amaspringbok ebhekene nelasefrance phesheya kwezilwandle ngonyaka we-2009.
Kwaba yihlazo kakhulu ngoba wayetshelwe kahle kusenesikhathi ukuba azilungiselele kepha wehlula noma esenikezwe lelo thuba. Asisayiphathi-ke eyabaculi abacula izinhlobo zomculo ezifana nomculo wekwaito, masikandi, isicathamiya, igospel neminye kuvalwe ngehlahla. Kuze kube ngcono abacula umculo wamakwaya ngoba bajwayele ukulicula iculo lesizwe emicimbini kahulumeni.
Kwakhona kubo abomculo wamakwaya kukhona obafica benambitha ubala uma sekufika esigabeni sevesi lesibhunu elithi
“Uit die blou van onse hemel, ubafica sebendwaze amehlo bemungunya ize. Ngonyaka we-1995 kwake kwasuka esinamathambo emathuneni asezinkawini, echesterville, ethekwini lapho kwakungcwatshwa khona amathambo amaqhawe ezishoshovu zomzabalazo, ayengamalunga omkhonto wesizwe afela ekudingisweni.
Umufi umnu Nelson Mandela wayelapho. Kwathi sekufanele kuculwe iculo lesizwe ezakithi zashaya unkosi Sikelela i-afrika omdala zaqeda. Umnu Mandela wenza imbala, amnikeze udedangendlale womhlaba aze azakhele isikhumulo sakhe sezindiza ukwenza lo msebenzi.
Imali ingena ngazo zonke izindlela, ize itshalwe nasegcekeni, emahhokweni, esibayeni nakwinqwaba yamabhizinisi aphethwe yizichuse. Umndeni wakhe uphila butepu ngempela kanti nomfazi ugcine esazi kwenzekani njengoba imali isidlala izingane nje la kwaSeal.
Ugcina esengena nasebukhosini imbala ewhite House emuva kokuboshwa ukuze alekelele ekuba- njweni kwalezi zigelekeqe, nokwenza aqhubeke nokwenza izindodla nsukuzonke.
Ekugcineni ziyafezeka izinhloso zokutholakala ukuthi ngobani lezi zigelekeqe ezikumshikashika wezidakamizwa nezikhali. Usenhlanhleni ugalakajana ngoba kusho ukuthi ijele likude naye ngoba lokhu akwenzayo ulekelela izwe nakuba imali ingena kuye ngqo.
Lokhu-ke kusho ukuthi impilo yakhe isisengcupheni nokwenza abe ngumahambe equba kumamotel. Isintu siyasho ukuthi akukho qili lazikhotha emhlane njengoba naye begcina bemtholile.
Ozophuma ukuphethe la wukuthi esikhathini esiningi okuningi sikwenzela imindeni yethu, siyivikele zikhathi zonke njengoba nala kugcina kunguye yedwa obhekana nokufa. Izingane ziphephile nonina. Iyangena e-cinema ngolwesihlanu oluzayo mhlaka-1.
NANAMUHLA kayikafuni ukunyakaza esicongweni IDESPICABLE ME 3 njengoba ngempelasonto edlule yomhlaka-18-20 bese ifake R 44 033 528 nakuba isile ezansi ngendlela ebukwa ngayo. Lumi kanje uhlu lwayishumi abehamba phambili ngaleyo mpelasonto ngokubukwa:
1. HITMANS BODYGUARD 2. GIRLS TRIP
3. SON OF BIGFOOT 4. BABY DRIVER 5. ANNABELLE 6. DESPICABLE ME 3 7. DUNKIRK
8. CAPTAIN UNDERPANTS 9. SPIDER-MAN: HOMECOMING
KUKANINGI SIBABONA BEDLA AMAZAMBANE...
NGUBARRY Seal oyinkunzi yesigelekeqe esilingiswa ngutom Cruise